औषधि सकियो, के गर्ने ? - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 16:43
औषधि सकियो, के गर्ने ?
इनेप्लिज २०७२ कार्तिक २४ गते १०:४४ मा प्रकाशित
बुटवल, २४ कात्तिक । नाकाबन्दीको कारण यस क्षेत्रमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव भएको छ ।
नेपालमा वार्षिक करिब रु ३५ अर्बको औषधि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल औषधि व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यसरी विदेशबाट आयात हुने औषधिमध्ये ५५ प्रतिशत औषधि भारतबाटै आउने गरेको महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
“भारतबाट आउने भारतीय उत्पादनका औषधि दुई महिनादेखि पूर्णरुपले रोकिएको छ” उहाँले भन्नुभयो ।
भारतबाट आउने औषधिमध्ये औषधिजन्य सर्जिकल सामान मात्र करिब रु १२ अर्बको नेपाल भित्रिने गरेको र अन्य २५ अर्बको औषधि खपत हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । नेपालमा उत्पादित औषधिले ४० प्रतिशत मात्रै माग धान्ने भएकाले अन्य भारतबाट आयात हुने गरेको छ ।
औषधि आयात नभएपछि अहिले शल्यक्रिया तथा मुटुरोगसम्बन्धी औषधिको अभाव सुरु भएको छ । शल्यक्रिया गर्दा प्रयोग हुने सर्जिकल सामान, सलाइन तथा हृदयाघात हुँदा प्रयोग गरिने औषधि तथा अक्सिजनको अभाव भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
भैरहवा नाकाबाट औषधि ल्याउन नदिएपछि एक सातादेखि सुनौलीमा रोकिएको छ । यसरी लामो समयसम्म औषधि जस्तो अत्यावश्यक वस्तु सीमा क्षेत्रमा रोकिँदा असमान तापक्रमका कारण गुणस्तरमा समस्या हुनसक्ने भन्दै व्यवसायीहरु चिन्तित देखिन्छन् ।
व्यवसायीले औषधि व्यवस्था विभागमार्फत औषधिलाई जहाजबाट ल्याउने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया बीच एक बर्ष पछि सीधा सम्पर्क सुरु
न्युयोर्क च्याप्टरको “भानु जयन्ती तथा रचना वाचन सम्पन्न”
बाइडेन र ह्यारिसलाई मार्ने धम्कि दिने मेरिल्याण्डका एक मानिसलाई ७ महिना कैद सजाय
अमेरिकी विदेश विभागमा स्वस्तिक खोपिएको भेटियो